Nosy Ranomasimbe Indianina Vanilla Pro Am Tours
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nosy Ranomasimbe Indianina Vanilla Pro Am Tours
Desambra 22, 2019
Ny Vanilla Islands Pro Am Tours dia hetsika golf izay natsangana nifandimby tao amin'ny nosy roa ao amin'ny Ranomasimbe Indianina. Fifaninanana golf ity miaraka amin'ny fahitana ireo nosy.
Ny andiany faha-3, izay natao teo anelanelan'ny 10 sy 20 desambra, dia nitondra mpanao golf frantsay tany La Reunion tamin'ny taranja Bourbon Golf Club sy Bassin Bleu. Ny dingana faharoa dia nitondra azy ireo nankany amin'ny maintso an'ny Anahita Golf Club sy ny Île aux Cerfs Golf any Mauritius.
Ekipa 19 misy mpilalao efatra (matihanina 1 ary amateurs 3) no nifanatrika nandritra ny fihodinana 6 tamin'ny fifaninanana.
Ny harivan'ny fanomezana loka nokarakaraina tao Anahita ny alarobia lasa teo avy eo dia namarana ny ampahany ara-panatanjahantena tamin'ny dia. Nomena valisoa avokoa ireo mpandray anjara tamin'izany, toy ny mahazatra.
Tamin'ny isa mavesatra 412 no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny ekipa Pro-Am any amin'ny Nosy Vanilla ny ekipan'ny Patrice Barquez matihanina, Jean Loup Duvail, Benjamin Legueu ary Richard Pellissero.
Ny ekipan'ny matihanina Leonard Bem, Catherine Ouvrard et Jean Pierre Ouvrard dia tafakatra tamin'ny laharana voalohany tamin'ny isa net, tamin'ny isa 1. Leonard Bem, noho izany dia nahazo loka roa tany amin'ireo nosy taorian'ny nandreseny ny French Open Doubles tao La Réunion andro maromaro talohan'izay.
Ankoatra ny valim-panatanjahantena, nilaza ny mpandray anjara rehetra fa nahatsapa fahafaham-po tamin'ny serivisy sy tombontsoa natolotra nandritra ny fijanonany ary efa te hiverina.
Ny ankamaroan'izy ireo dia nahatoky tamin'ny fandaminana nanomboka tamin'ny andiany 1! Ny porofon'izany dia ny kalitaon'ny vokatra noforonina niaraka tamin'ny mpiara-miombon'antoka rehetra eto amin'ny Ranomasimbe Indianina.
Betsaka ihany koa ny tombony azo avy amin'izany. Mampiseho ny fandaminana ny làlana ho an'ny ho avy io.
Ho an'i Pascal VIROLEAU, Talen'ny Nosy Vanilla, "indray mandeha tamin'ity taona ity, dia nahomby ny hetsika. Mampiseho an'izao tontolo izao ny kalitaon'ny fampianarana sy ny serivisy, mba hisarihana mpizahatany vaovao.
Ny hetsika mitambatra atsy nosy dia tsy maintsy atao ary misy dikany vaovao ny fiaraha-miasa eo amin'ireo nosy roa ireo.
Nahavita fandrosoana tamin'ny ambaratonga rehetra ao amin'ny fikambanana izahay. Misy ny fahafaham-po avo lenta ka ny andiany fahefatra izao no ao anaty karatra. ”
Israel mpitsidika izao dia milaza an'i Shalom any Tanzania
Mandany ny fialantsasatra eo amin'ny Tendrombohitra Kilimanjaro